Real-nguva satellite maonero akasununguka pamhepo. Ndekupi kwandingaone? | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Iwe unogona kutarisa kuburikidza nemakamera eInternet Space Station pane webhusaiti: http://space.utema.ru/earth-online/, kunewo mhinduro dzemimwe mibvunzo ine chekuita nekutepfenyura. Izvo zvinofanirwa kutarirwa mupfungwa kuti nhepfenyuro dzimwe nguva inopindirwa nekuda kwekuti chiteshi chinosiya nzvimbo yekutaurirana.
Pakutanga, munhu aigona kungorota nezvechinhu chakadai. Iye zvino munhu wese, kana vachikwanisa kuWorld Wide Web, vachakwanisa kuona nguva chaiyo mepu yenyika, uye zvese izvi ndizvozvo vakasununguka.
Hapana chikonzero chekuenda chero kupi. Iwe unogona kuenda kune ino kana ino saiti uye ndizvo. Google inopawo ficha iyi.
Tarisa uye unakirwe nokunaka kwenyika.
Kuonekwa kwesatellite munguva chaiyo nhasi haisi dambudziko. PaPasi rese reWebhu, iwe unogona kuwana zviri nyore masosi ari kufara kukuratidza kwese runako uye runako rwepasi redu. kuona kwakanaka kwazvo. Ini ndanyatsoda saiti iyi, ndinokupa zano kuti utarise.
Online inogona kuonwa pane ino saiti, semuenzaniso. Sezvazvakanyorwa, kune kutepfenyurwa kwehupenyu kubva kuISS.
Asi pano ndakanga ndisingakwanisi kuona. Izvo zvinoita kuti ISS yaive mumumvuri (iyo inotaura kuti ipapo dema dema rinoratidzwa).
Iko kune zvakare iyo Meso paPasi chirongwa chekuona kubva pane satellite zvinhu zvakasiyana siyana mudenga (kwete chete Pasi).
Iyo yakanyanya uye inoshanda kwazvo, ine yakanaka mifananidzo inoratidza kamera inogona kuoneka pano. Ikoko iwe unogona kazhinji kuona yakanyanya nhepfenyuro, yakakwirira-yemhando uye isina glare kubva kuZuva uye zuva. Zvakare ikoko, vashandisi vanotumira mafoto avo kubva kunhepfenyuro - dzimwe nguva inonakidza kwazvo. Iwe unogona kutsvaga iyo ISS nzira pamusoro peguta rako uye nyika ipapo uye uone munguva chaiyo iwe pachako kubva munzvimbo.
Icho chokwadi ndechekuti Pasi rinotorwa kubva kuma satellite mu 24 modhi pazuva, 7 mazuva pavhiki. Mushure mezvose, zuva rinogara richipenya kune rumwe rutivi rwenyika, iwe unogona kutarisa nhepfenyuro inogara pawebhusaiti iyi http://sibirica.su/potaynaya-dver/zemlya-iz-kosmosa-pryamaya-translyatsiya-s-mkshy;s
Yechokwadi-nguva nhepfenyuro nhepfenyuro kubva kuma satellites inogona kuonwa pane dzakawanda masosi Ini ndichanyora mamwe acho pazasi:
Kune nzvimbo zhinji dzekuona mepu online. Iwe unogona kuzviona pano, apa uye apa. Chinhu chikuru ndechekuti rakasununguka zvachose. Maonero ari kuita mesmerizing, ini ndoda kuongorora zvakare uye zvakare. Chinhu chikuru ndechekuti satellite iri munzvimbo inodiwa kuti utarise.
Zvinonakidza kwazvo kutarisa kufamba uye kusimukira kwepasi redu, makungwa nenzizi, makore, mvura uye kutinhira, shanduko yemamiriro ekunze uye mweya yemasikirwo, isu tese tinovimba naro, uhwu hupenyu hwevanhu. Iwe unogona kuona chinongedzo pamhepo.
Kwete chete dzakasiyana-siyana dzakashata uye masipiresi anotenderera anoenderera mudenga reamai vedu Pasi, asiwo International Space Station, iyo, mukuwedzera kune zvimwe zvimwe zvigadzirwa, zvakare ine webcam inozivisa inowanikwa online yepasi kubva mudenga. Kuti uone Pasi kubva pakona iyi, ingo enda kune ino saiti. Chokwadi, kana chiteshi chiri parutivi rwakasviba, saka hapana cha uchaona. Mukuwedzera, hakuwanzo kuve nekubatana, saka iva nemoyo murefu.
Mibvunzo ye20 mu database yakagadzirwa mu 0,386 masekondi.